Yini ebangela i-potassium ephansi? Ungayelapha kanjani i-hypokalemia - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Ukuphuma Umphakathi, Ukuphila Kahle Izindaba Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa Izidakamizwa Vs. Umngani Inkampani, Imfundo Yezempilo Umphakathi Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Izilwane Ezifuywayo Izindaba, Wellness Ukuphila Kahle Umphakathi, Inkampani
Main >> Imfundo Yezempilo >> Yini ebangela i-potassium ephansi?
Yini ebangela i-potassium ephansi?
Ngokungangabazeki uzwile ukuthi i-apula ngosuku ligcina udokotela engekho. Kepha kuthiwani ngobhanana ngosuku? Umzimba wakho udinga i-potassium ukuze usebenze. Ngenye yezimbiwa ezibalulekile empilweni . Kuyasiza ukulawula ibhalansi yoketshezi lomzimba wakho, kugcina uhlelo lomzimba wakho lwe-electrolyte, kunciphisa umfutho wegazi, futhi kwehlisa ingozi yokushaywa unhlangothi.
Kodwa-ke, uma kukhulunywa nge-potassium, izindaba zebhalansi.
I-potassium eningi kakhulu, ebizwa nge-hyperkalemia, ingadala ubuthakathaka, ukukhathala, ukulahleka kokusebenza kwemisipha, kanye nokushaya kwenhliziyo okuphuzile. I-potassium encane kakhulu, ebizwa ngokuthi i-hypokalemia, ingadala ubuthakathaka bemisipha, ukudumba kwemisipha, ukushaya kwenhliziyo, nokuqaqamba — kungadala nokukhubazeka nokuhluleka ukuphefumula.
Izinga eliphansi le-potassium lingadala izinkinga ezinkulu zempilo , njenge-high blood pressure namatshe ezinso, yingakho kusiza ukwazi ukuthi ungazibona kanjani izimpawu ze-potassium ephansi nokuthi yini engase ikubangele. Ngenhlanhla, uvame ukukhuphula amazinga e-potassium uwedwa ngokudla futhi ukwengeza . Nakhu okudingeka ukwazi.
Yini ebhekwa njenge-potassium ephansi?
Amazinga aphansi e-potassium amazinga egazi e-potassium angaphansi kuka-3.5 mEq / L; ngaphansi kuka-2.5 mEq / L kungasongela impilo. Amazinga ajwayelekile e-potassium, kubantu abaningi, aphakathi kuka-3.5 no-5.0 mEq ilitha ngalinye (mEq / L), ngokusho Ukuvuselelwa kwemitholampilo ka-2018 . Noma yini engaphezulu kuka-5.0 mEq / L ithathwa njengephakeme, futhi amazinga angaphezu kuka-6.0 angaba yingozi futhi angahle adinge usizo lwezempilo ngokushesha.
Qaphela: I-Hypokalemia ayijwayelekile kubantu abasebenza izinso okujwayelekile.
Abantu abaningi abayi kudokotela ngezinga eliphansi le-potassium noma ngoba bacabanga ukuthi bangama-hypokalemic. Imvamisa kutholakala lapho wenza umsebenzi wegazi ngenxa yokuthi unezimpawu zokunye ukugula, okufana nesifo se-adrenal, noma lapho kwenziwa umsebenzi welebhu ojwayelekile, okuvame ukudingeka uma uthatha umchamo.
Yiziphi ezinye zezimpawu ze-potassium ephansi?
Abantu abaningi abazitholi izimpawu ze-hypokalemia ize ibe nzima, futhi inani le-potassium lehle ngaphansi kuka-3.0 mEq / L.
Abantu abanokushoda okuphakathi kwe-potassium bangathola:
Umuzwa ojwayelekile we-malaise
Izimpawu zokushoda kakhulu kwe-potassium zifaka:
Isigqi senhliziyo esingajwayelekile noma ukushaya kwenhliziyo
Ukuphelelwa isifiso sokudla, isicanucanu nokuhlanza
Ukulimala noma ukuba ndikindiki
Itholakala kanjani i-hypokalemia?
I-potassium ephansi akusona isifo uqobo lwayo, kepha kunalokho iyisifo sesimo esingaphansi noma isifo. Lapho kutholakala i-potassium ephansi, udokotela wakho angase asikisele ukuhlolwa okwengeziwe ukuthola imbangela. Ukuhlolwa okwengeziwe kwegazi kungahlola i-glucose, i-magnesium, i-calcium, i-sodium, i-phosphorus, ama-hormone e-thyroid, ne-aldosterone. Udokotela wakho angaphinde a-ode i i-electrocardiogram (EKG) ukuhlola umsebenzi kagesi enhliziyweni yakho.
yini engathathwa ngabesifazane abakhulelwe isicanucanu
Kunezinhloso ezine eziyinhloko lapho welapha amazinga aphansi e-potassium:
Ukunciphisa ukulahleka kwe-potassium
Ukugcwaliswa kabusha kwe-potassium
Ukuhlolwa kobungozi obungaba khona
Ukunqunywa kwesizathu, ukuvimbela iziqephu ezizayo
Kubalulekile futhi ukwelapha izimo zezokwelapha eziyisisekelo noma ukuqeda imbangela. Isibonelo, uma ukusetshenziswa ngokweqile kwama-laxatives kubangela i-hypokalemia, ukubhekana nezidingo zomzimba noma ezingokwengqondo zama-laxatives kufanele kube yingxenye yohlelo lokwelashwa. Uma isiguli sidinga ukukhishwa isisu, udokotela waso angaxoxa ngokufakwa esikhundleni okuvumela i-potassium ukuthi ihlale emzimbeni (i-potassium-sparing diuretic) noma inikeze izithasiselo zansuku zonke ze-potassium.
Kubantu abane-potassium ephansi ngokweqile, udokotela angancoma ukwelashwa ngemithambo.
Ngenkathi i-potassium iyisakhi somzimba esisithola ekudleni, ukudla kukodwa akuvamile ukudala i-hypokalemia. Kunezimbangela eziningi ezingaba khona ze-hypokalemia kanye nabantu abathile abanengozi eyengeziwe yokushoda. Lokhu kufaka phakathi:
Ukuhlanza njalo noma isifo sohudo (kufaka phakathi i-bulimia noma ukuhlukunyezwa kwe-laxative)
Ukuphuza kakhulu utshwala
Ukudla okunomsoco nokunye ukuntuleka kokudla okunempilo , njengokushoda kwe-magnesium noma i-folic acid
Izinkinga ze-adrenal, ezifana nesifo sikaCushing
Ukuphazamiseka okungajwayelekile, njenge-Liddle syndrome, i-Bartter's syndrome, i-Gitelman syndrome
Isifo samathumbu esivuthayo
Abantu abane-pica (ikakhulukazi uma bedla ubumba, njengoba ubumba lubopha i-potassium emgodini wamathumbu futhi lungadala ukukhuphuka kwe-potassium)
Abantu abathatha imishanguzo ethile, njenge-diuretics
I-hypokalemia eyenziwe ngemithi
Imithi ethile kungadala namazinga aphansi e-potassium, kufaka phakathi:
Izidakamizwa: Cishe i-80% yabantu abathatha isisu banesifo se-potassium ngenxa yokwanda kokuchama. Izidakamizwa, noma amaphilisi amanzi, angabhalwa ezigulini ezine-high blood pressure, ukuhluleka kwenhliziyo, nesifo sezinso. Izidakamizwa isisusa esivame kakhulu se-hypokalemia.
Ama-laxatives: Ama-laxatives angadala ukulahleka kwe-potassium esitokisini.
Izidakamizwa ze-beta-adrenergic agonist: Ama-bronchodilators, ama-steroids, noma i-theophylline (asetshenziselwa i-asthma, i-emphysema, ne-COPD) angathinta i-serum potassium ne-glucose egazini.
Ama-antibiotic athile: Ngemithamo emikhulu, amanye ama-antibiotic angakhuphula ukuphuma kwe-potassium ngezinso.
I-insulini: Imithamo emikhulu ye-insulin, engalaphaI-HyperosmolarI-HyperglycemicI-Nonketotic Syndrome(HHNS), isimo esiyingozi esidalwa amazinga aphezulu kashukela egazini,zivame ukulekelelwa nge-potassium efakwa emithanjeni.
Ingabe i-potassium ephansi iyingozi?
IHypokalemia ingafaka isandla, noma ibangele ezinye izingqinamba zezempilo, kufaka phakathi:
Ukuncipha kwamaminerali amathambo
Ukungabekezelelani kwe-glucose ngengozi eyengeziwe yokuthuthukisa uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2
Ukukhishwa kwe-calcium yomchamo
Amazinga aphansi kakhulu e-potassium angadala izimo zempilo ezinzima kakhulu, njengezinkinga zesigqi senhliziyo, futhi angadala nenhliziyo yakho ukuthi ime.
OKUSHIWO: Izimpawu ze-13 zezinkinga zenhliziyo okufanele zikhathazeke ngazo
Ungawanyusa kanjani amazinga e-potassium
Ezimweni ezimnene ze-hypokalemia, amazinga e-potassium angajwayelekile phakathi nezinsuku ezimbalwa ngemuva kokuqala ukwanda kokudla kwe-potassium. Ukuqinisekisa ukuthi udla ukudla okwanele nge-potassium nsuku zonke kungasiza ukukhulisa nokugcina amazinga e-potassium anempilo. Ukunconywa kwe-potassium nsuku zonke, ngokusho kwe- Izifundiswa Zikazwelonke Zesayensi, Ubunjiniyela Nezokwelapha (NASEM) yile:
Abantu abadala abaphilile: 3,400 mg ngosuku kwabesilisa, 2,600 kwabesifazane (abaneminyaka engu-19 nangaphezulu)
Intsha eneminyaka engu-14 kuya kwengu-18 ubudala: 3,000 mg wesilisa, 2,300 mg wesifazane
Izingane ezineminyaka engu-9 kuya ku-13: 2,500 mg wesilisa, 2,300 mg wesifazane
Izingane ezineminyaka engu-4 kuya ku-8: 2,300 mg wesilisa, 2,300 mg wesifazane
Izingane ezineminyaka engu-1 kuya ku-3: 2,000 mg wabesilisa nabesifazane
Izingane ezineminyaka engu-7 kuya kwezingu-12 izinyanga: 860 mg wabesilisa nabesifazane
Ukuzalwa izinyanga eziyisithupha: 400 mg kwabesilisa nabesifazane
Ukudla okunothe nge-potassium
Ukudla okuyisihlanu okuphezulu kakhulu emazingeni e-potassium yilawa:
Ukudla okunothe nge-potassium Usayizi wokukhonza Inani le-potassium Amaphesenti inani lansuku zonke *
Amabhilikosi omisiwe ½ inkomishi 1,101 mg 32.3% -42.3%
Amalenti aphekiwe 1 inkomishi 731 mg 21.5% -28.1%
Ama-prune omisiwe ½ inkomishi 699 mg 20.5% -26.8%
I-squash acorn squash 1 inkomishi 644 mg 18.9% -24.7%
Omisiwe ½ inkomishi 618 mg 18.1% -23.7%
Okunye ukudla okuphezulu kwe-potassium kufaka:
Amawolintshi / Ijusi lewolintshi
Indlela engcono kakhulu yokukhulisa amazinga e-potassium ngokushesha ukuthatha isithasiselo se-potassium, iningi laso elitholakala ngaphandle kwe-counter, uthi ULinda Girgis , MD, udokotela womndeni oqinisekiswe yibhodi emisebenzini yangasese eSouth River, eNew Jersey. Lapho izinga selifinyelele ezingeni elijwayelekile, ungahle ukwazi ukuyeka izithasiselo futhi ugcine amazinga e-potassium ngokudla.
Ukuthatha izithasiselo, noma kunjalo, kungaba yingozi. Izithako ze-potassium zingadala imiphumela emibi emathunjini noma amazinga aphezulu kakhulu we-potassium.
Ukuba namazinga e-potassium aphakeme kakhulu kungaba yingozi njengalapho ephansi kakhulu. Noma yikuphi ukweqisa kungaholela kuma-arrhythmias enhliziyo nakwezinye izinkinga, kusho uDkt. Girgis. Kungcono ukusebenzisana nodokotela wakho lapho uthatha izithasiselo ukuze amazinga akho e-potassium abhekwe ukuqinisekisa ukuthi asendaweni ephephile.
Izengezo ezithengiswa ekhawunteni kungenzeka zinganele uma izinga lakho le-potassium liphansi kakhulu.I-FDA ikhawulela izengezo ezingaphansi kuka-100 mg we-potassium, okuyingxenye nje kuphela yokudla okunconywayo nsuku zonke. Odokotela bangakhipha isengezo esinamandla kakhulu se-potassium kwiziguli ezine-hypokalemia.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezithako ze-potassium:
Kungaba yinselele ukwazi ukuthi yiluphi uhlobo isengezo esihle kakhulu se-potassium kuwe. I-Potassium chloride isetshenziswa kakhulu kubantu abangenayo i-potassium, ngokusho kukaDkt. Girgis, I-potassium phosphate iyasiza uma isiguli sinayo i-phosphate. Uma isiguli sithanda amatshe ezinso, i-potassium citrate ingahle ibe wusizo ngoba i-citrate inganamathela ku-calcium emchameni, ivimbele ukwakheka kwe-crystal. Uncoma ukuthi ufune iseluleko sezokwelapha ngaphambi kokuthatha noma yiziphi izithasiselo.
I-Allegra vs. Allegra-D: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
zithini izindleko ze-viagra ejwayelekile
Ngingathatha i-zyrtec ne-benadryl ndawonye izifuba
ahlala isikhathi esingakanani izimpawu b
Uhlala isikhathi esingakanani u-50mg we-vyvanse
I-lortab ne-hydrocodone kuyinto efanayo